Classic ukwelukwa "Fanny Lum" - a namasongo ezimibalabala eyenziwe bands zenjoloba. Imbali futhi uchungechunge ahlale motifs ethandwa kakhulu ekwenzeni yokuqala yezingane eyeve eshumini nambili ekhombisa. Abafundi uphiwa imiyalelo enemininingwane ne incazelo kanjani ukuba sifake namasongo eyenziwe bands zenjoloba.
Ukuze kukhiqizwe le imihlobiso esilula, kodwa enhle kakhulu udinga rezinochki onsomi, omhlophe, obomvu, ophuzi nokukhanya imibala eluhlaza, kanye ingwegwe, clip futhi imishini "Slingshot" futhi "Rainbow uhlaka lokweluka". Ukugcizelela ukubukeka zikanokusho yomkhiqizo kungenziwa wanezela ukuba sifake ubuhlalu oluhlaza kanye onsomi.
Susa kusuka umshini irowu emaphakathi ngamakhalamu, futhi sandise asele ezinhlangothini evulekile kuye. Phonsa in bands zenjoloba onsomi ngendlela elandelayo: owokuqala - kukhalamu yesithathu ku-irowu kwesokunxele ikholomu yokuqala engakwesokudla, kwesibili - kukhalamu yesithathu emgwaqeni ophahlwe yizindlu kwesokudla ngakwesokunxela lomugqa wokuqala, eyesithathu - ne imigqa esisele lakwesobunxele kwekholomu lokugcina engakwesokudla. Kugcine nokujikijela gum kuwo wonke amakholomu eziyisithupha ngendlela evamile. Uma wazi indlela yokwenza namasongo zakudala gum, imbali, nokwelukiweyo ngendlela ezinjalo ngeke kube inkinga ngawe.
Crochet elungile aphansi rezinochku lomzila wesithathu futhi ikholomu kwesokudla perebroste yona kukholomu yokuqala irowu kwesokunxele, a gum esiphansi kanye irowu lokuqala lakwesobunxele - ikholomu kwesokudla emgqeni wesithathu. Ngokufanayo, kufanele proplesti "Fanny Lum" phezu asele amabili namabhuzu amakholomu.
Phonsa in ezintathu gum ezimhlophe crosswise phezu kwabo - amathathu aphuzi futhi ezintathu abomvu. Setha kabusha rezinochki onsomi maphakathi. bands zenjoloba ababili emaphakathi onsomi donsa oluhlaza "Fanny Lum". Susa kusuka umshini ukulungele imbali futhi aluka ngendlela efanayo izikhala ezinjalo eziyisithupha.
Njengomthetho, Slingshot trailing izihloko Wabasaqalayo - namasongo aphansi eyenziwe bands zenjoloba. Imbali - ingxenye kakhulu ngobuchwepheshe nzima we umhlobiso, ngakho esigabeni sesibili kuba lula kakhulu kuneyokuqala. Weave iketango evamile yokukhanya rezinochek oluhlaza. Njengoba nje uzolunga izihitshela lokuqala, ukudonsa ushingamu aphansi kokubili amakholomu maphakathi futhi aphonse nge Slingshot ngolokuqala imbali-ucezu. Setha kabusha ezansi isikhungo rezinochki futhi aphonse ku Lime phezulu "Fanny Lum". Qhubeka ukuze sifake a isongo nobude oyifunayo. Uma usebenzisa ubuhlalu ukuhlobisa, beka ezimbili ukukhanya rezinochki oluhlaza phakathi workpiece kanye bead. Ngakho, wena maduze uthole isongo enhle eyenziwe bands zenjoloba. Imbali emshinini "Rainbow uhlaka lokweluka", nokwelukiweyo yilo bhukwana lungasetshenziswa womshini emasongweni yasekuqaleni.
Ukwakha imihlobiso obucayi udinga, "Fanny Lum" umbala okhanyayo green, ezibomvana, ezinsomi ne-lilac, kanye ingwegwe, clip futhi ezimbili emshinini: "Monster Tail" futhi "Rainbow uhlaka lokweluka".
Phonsa ekukhanyeni gum esiluhlaza wonke amakholomu eziyisithupha umshini "Monster Tail", ezimazombe wakhe eyisishiyagalombili phambi ikholomu ngayinye. Beka phezulu ezintathu pink incwadi rezinochki "F" ke - Lilac kanye purple. Phezu kwakho konke amakholomu ngokwesokunxele, hhayi ukusonta, lime "Fanny Lum". Nokho, Mhlawumbe, ukulaya kungase kubonakale kunzima kakhulu, uma ufunde ukuthi ungadala lezi namasongo eyenziwe gum, emacembeni ezimbali ezintekenteke ahlukene ngeke zisaba ukumela umsebenzi lwenzeke kini.
Setha kabusha wonke amakholomu ephansi ukukhanya green gum isikhungo. Bamba hook lime rezinochku ne ikholomu central lomugqa wokuqala futhi perebroste ke ikholomu central lomugqa wesibili. Faka hook ngaphansi zonke ukukhanya iluphu oluhlaza, kwesincane omunye "Fanny Lum" nangebala.
Donsa rezinochku entsha ngokusebenzisa ukukhanya iluphu oluhlaza, kube komunye umkhawulo gum futhi aphonse ku ngengwegwe. Susa ukukhanya iluphu oluhlaza kusukela ikholomu, bese - futhi zonke amacembe. Uma usuvele baqonde indlela ukuba sifake namasongo eyenziwe gum, izinga lokuba ayenzi imbali ngawe kalula. Phinda zonke izinyathelo isinyathelo sokuqala futhi sifake elinye izingcezu eziyisithupha efanayo.
Thatha umshini "Rainbow uhlaka lokweluka" futhi aphonse kuwo ukukhanya gum oluhlaza. Nweba umshini futhi ikholomu yokugcina phakathi irowu ngokwesokunxele contact Lime gum badedelane ezimbili. Maphakathi iheksagoni ngamunye aphonse nge nalutho-akujabulela. Faka oxhumana naye hook "Fanny Lum", kwesincane phezulu nokukhanya gum oluhlaza perebroste ke kubha, ngalo kuqala; yesibili - ku ikholomu lomugqa okuphambene. Ngendlela efanayo propletite zonke hexagon.
Faka hook ngaphansi zonke oluhlaza ukukhanya iluphu zokugcina kukholamu maphakathi umshini, kwesincane Lime rezinochku. Susa sigqoka kusukela umshini futhi isiqeshana evikelekile.
Njengomthetho, ngisho nezingane ukubuyisa futhi ngokweqile asebenzayo futhi intsha anganika uhlobo elula okunjalo ngenalithi, njengokulaya ukwelukwa ka namasongo kusukela izinsini. Imbali, ezichazwe ngenhla, ingasetshenziswa ukwakha ringlet amahle - nje ngokwanele yokwelula iluphu preform lime ngomunye.
Ladybird kusuka amabhodlela epulasitiki - ubuhle ukuthi kungadalwa ngezandla zakho!
Nezikhencezo amabhodlela epulasitiki ezenziwe ngezandla zabo
Natalya Kucher: Biography, lokusungula. Bard